SARS-CoV-2 Ndị na-emepụta na ndị na - eweta ya - China SARS-CoV-2 Factory
Ngwaọrụ sistemụ maka SARS-CoV-2 & Influenza A / B Combo Antigen Rapid Test
Ngwa sistemụ StrongStepS maka SARS-CoV-2 & Influenza A / B Combo Antigen Rapid Test na-eji ule chromatographic mpụta agbapụta ule. Enwere eriri atọ na ngwaọrụ ahụ na - achọpụta SARS-CoV-2, ụdị influenza A na ụdị B influenza, Latex conjugated antibody (Latex-Ab) nke kwekọrọ na SARS-CoV-2 / Flu A / Flu B na - akọrọ. njedebe nke akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ anụ nitrocellulose ọ bụla. SARS-CoV-2 / Flu A / Flu B na-alụ ọgụ bụ nkekọ na Mpaghara Ule (T) na Biotin-BSA bụ njikọ na Mpaghara Njikwa (C) na warara ọ bụla. Mgbe agbakwunyere ihe nlele ahụ, ọ na-agagharị site na ịgbasa okpu na-emegharị rex conxugate latex. Ọ bụrụ na ọ dị na nlele, SARS-CoV-2 / Flu A / Flu B antigens ga - ejikọ aka na nje ndị kachasị conjugated.
Vibrio Cholerae O1 / O139 Antigen Combo Nnwale Nnwale, H. Pylori Ag Ngwa Ule Na-achọpụta Antigen, Igm / Iggrapid Ule Nnwale, Coronavirus Antigen Nnwale Ngwa, Coronavirus Maka Covid-19 Ule, Akwụkwọ akụkọ Coronavirus Rapid Test Ket,